Tantaram-Pifanolanana Teo Amin’i Bolivia sy i Shily, Moron-dRanomasina · Global Voices teny Malagasy
Tantaram-Pifanolanana Teo Amin'i Bolivia sy i Shily, Moron-dRanomasina
Voadika ny 14 Janoary 2018 16:07 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manana lohahevitra samihafa iadin-kevitra i Shily sy Bolivia. Ny herinandro lasa teo dia ny niandohan'ny Charango, fitaovan-javamaneno hita any Amerika Afovoany sy Atsimo. Nanome izany ho fanomezana ho an'i Condolleza Rice ny filoha Boliviana Evo Morales, raha nanome izany ho fanomezana ho an'ny kintan'ny rock, Bono kosa ny filoha teo aloha Lagos. Jereo ny lahatsoratr'i Eduardo Ávila raha te-hahalala bebe kokoa momba ity lohahevitra ity.
Olana tsy voavaha ho an'ny firenena roa tonta hatramin'ny taona 1863 ny fidirana an-dranomasina. Nahatonga an'i Bolivia tsy hanana morontsiraka na fidirana amin'izany ny Ady tany Pasifika tamin'ny taona 1879. Etsy ankilany, nibodo ny faritanin'i Shily i Bolivia teo aloha. Ny antony mahatonga an'io ady io dia hazavaina amin'ny antsipirihany ao amin'ny tranokalan'ny “Guerra del Pacifico” (ES).
Inona no eritreretin'ireo bilaogera Shiliana?
Nanao fitsapan-kevitra ny gazety “La Tercera” (ES), izay mampiseho fa ny 66% ny Shiliana no tsy miombon-kevitra amin'ny fanomezana moron-dranomasina ho an'i Bolivia. Hablemos de Algo (ES) indray namoaka fanadihadiana momba izany fitsapan-kevitra izany ary nanambara fa “mila miady mba hiaro ny faritanintsika isika.” Regiones sin Fronteras (ES) kosa nanoratra hoe “Adinon'i i Evo fa firenena 30 mahery manerana izao tontolo izao no tsy manana fidirana an-dranomasina ary tsy mitaky izany izy ireo vao hahomby.” Los Cuatro Puntos Cardinales son tres: el Norte y el Sur (ES) kosa mijery ireo safidy hafa ary nanapa-kevitra fa “ny fomba tsara indrindra hamahana ny olana, dia amin'ny fanaovana fifanarahana izay ahafahan'ny Boliviana mampiasa ny seranan-tsambo Shiliana, miaraka amin'ny vidiny ambany sy taha manokana, na mamela ny orinasa Boliviana hiasa any amin'ireo seranan-tsambo Shiliana sady tsy mandoa haba. ” Panorama Político (ES) indray manoritra fa ny vahaolana “dia fanehoana fahavononana hanao tsara eo amin'i Shily sy Bolivia. “Nilaza ihany koa izy fa “tokony hanome tany amoron-dranomasina lehibe ho an'i Bolivia i Shily. Afaka manome fanamafisana ara-toekarena, etona sy fanonerana hafa i Bolivia “
Febroary 2021 41 Lahatsoratra